Insulator မှို ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ် စက်ရုံ - Jiangshan ဟွာအာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပညာ Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးထိုး မှို > Insulator မှို
Insulကtor မှို ဟုတ်တယ် က speciကl insulကtion ထိန်းချုပ်မှု, cကn plကy ကn importကnt အခန်းကဏ္။ in overheကd trကnsmဟုတ်တယ်sion လိုင်းများ။
Insulator သည်အထူး insulation control ဖြစ်ပြီး overhead transmission လိုင်းများမှာအရေးပါနိူင်တယ်။ တိုင်များအတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ဗို့အားမြင့်မားသောဗို့အားဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှုမျှော်စင်တွင်တီထွင်ထားသော disc-insulator တွင်တွေ့ရသောကြောင့်များသောအားဖြင့်ဖန်သို့မဟုတ်ကြွေထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတွားသွားသတ္တဝါအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လျှပ်စစ်ဝန်အခြေအနေများပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မဖြစ်သင့်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဖိအားနှင့်ပျက်ကွက်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်သိသာသောသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့်အသုံးပြုမှုသက်တမ်းကိုပျက်စီးစေပါသည်။
insulator တွင်လည်း APG မှိုအားသာချက်များ:
1. ပစ္စည်း: P20
2. တစ်သက်တာ: အကြိမ်ပေါင်း 50,000-100,000
၃။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ၄၀ ကျော်။
၂ ။ hydrophobic ဖြင့်မျက်နှာပြင်သည်အပေါ်ယံတွင်ရေမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းကြောင့်လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ခုခံမှုမှတက်လာသည်။
3. ပြင်းထန်မှု, ပေါ့ပါးအလေးချိန်။ သော့ခတ် core ကိုဆန့အားမြင့်မားသောကြောင့်, insulator တွင်လည်းအလွန်ပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ တာဝါ၏အင်အားကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်။
4. အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း။ ကောင်းမွန်သောချေးမှုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး ၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးရေရှည်အလုပ်တွင် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသည်။
အရွယ်အစားသေးငယ်။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။ ထီးပြားသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ၊ ထို့ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အဆင်ပြေစေသည်။
APG နည်းပညာမှိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် -
hot Tags:: Insulator မှို, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အမြင့် အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးပေါ်, စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်
APG ဆေးထိုး မှို
Epoxy ဗဓေလသစ် ဆေးထိုး မှို